लगातर हाइ आइराख्नु खतरा हुनसक्छ, यसबारे ख्याल नगर्दा यसरी हुनसक्छ मृत्यु ! जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
लगातर हाइ आइराख्नु खतरा हुनसक्छ, यसबारे ख्याल नगर्दा यसरी हुनसक्छ मृत्यु ! जानिराखाै
सामान्यतया हाई निद्रा नपुगेको खण्डमा आउँने आम जन विश्वास रहँदैं आएको छ । व्यस्त जीवनशैलीले स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न गाह्रो हुन थालेको छ । एक मानव शरीरलाई निन्द्रा नपुगेको अवस्थामा शरीरमा थकान महसुस हुनेगर्छ भने शरीर पूर्ण रुपले स्वस्थ नहुने पनि गर्छ । चिकित्सकहरुको अनुसार निन्द्रा नपुगेको कारण हरेकलाई हाई आउने गर्छ ।
तर सामान्य भन्दा धेरै हाई आउनु भने स्वास्थ्यको लागि खासै राम्रो हुँदैन । सामान्य भन्दा धेरै हाई आयो भने निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हुन सक्छ ।
सामान्य भन्दा धेरैं हाइ आइरहेको छ भने तपाईको शरीरमा थायराइडको हर्मोनको कमि भएको अथवा थायराइड हर्मोनको उत्पादनमा केहि समस्या आएको हुन सक्छ ।
यसरी लगातार हाई आइरहेको खण्डमा हाइपोथायराइड हुने गर्छ । यो बेलामा पनि चिकित्सकहरुको अनुसार तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
तपाईलाई कुनैं रोग लागेको छ र पटकपटक औषधि अ्खाइरहनु भएको छ भने ख्याल गर्नुहोला । रोग लगेको व्यक्तिलाई बारम्बार हाइ आउँनु खत्तरा हुन सक्छ ।
औषधिहरूको बारम्बार बारम्बार उपयोगको कारण हाइ आउने गर्छ । यस्तै फोक्सो सम्बन्धि रोग लागेको खण्डमा शरीरमा अक्सिजनको कमि हुँदा पनि धेरै हाई आउने गर्छ ।
Topics #अनिन्द्रा #खतरा #निन्द्रा #मृत्यु #हाइ #हाइ अाइराख्नु खतरा
Up Next के खाने र के नखाने पत्थरी भएमा ? जान्नुहोस् पत्थरी सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण जानकारी !
महिलामा सेतो पानी बग्नुका कारण के के हुन् ? के छ त यसको उपचार र रोकथाम ?
योनीबाट सेतो पानी बग्नुका कारणहरु रोगग्रस्त पुरुषसंग यौन सम्पर्क गर्नाले यौनसम्पर्क पछि योनीको सफा पानीले सफा नगर्नाले बारम्बार गर्भपतन गराउनाले…